लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा “विश्वपरिक्रमा’’ - Enepalese.com
लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा “विश्वपरिक्रमा’’
इनेप्लिज २०७६ फागुन १ गते ११:२३ मा प्रकाशित
ईनेप्लिज प्रतिनिधि,१२ फरवरी, वाशिंटन डिसी । ई.सं. २००७ जनवरीवाट वाशिंटन डिसीबाट प्रकाशन हुन थालेर २०१५ फरवरीमा विश्राम लिएको पाक्षिक नेपाली अखवारका पूरै अङ्कहरु लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसले अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुस्तकालयको एशिया विभागमा राख्नका लागि प्रकृया थालनी भएको छ । आज लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसका लाईब्रेरियन डेविट जे सावेल, दक्षिण एशिया रेफरेन्स लाईब्रेरियन जोनाथन लेअर तथा सारलोट गिल्सले विश्वपरिक्रमाका सम्पादक गोविन्द गिरी प्रेरणाले दान दिएको विश्वपरिक्रमाका १३३ अङ्क लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको एशिया शाखामा ग्रहण गरे ।
स्मरणीय छ, डिसी मेट्रो क्षेत्रबाट सन् २००६ को जनवरीमा “विश्व सन्देश’’ पाक्षिक प्रकाशन आरम्भ भएको थियो । सो पत्रिकामा गोविन्द गिरी प्रेरणा एक सम्पादकको रुपमा रहेका थिए । तर केही महिनापछि उनी सो पत्रिकाबाट अलग भएका थिए र २००७ को जनवरीवाट आफ्नै एकल सम्पादनमा “विश्वपरिक्रमा’’ शुरु गरेका थिए । “विश्व सन्देश’’ भने केही समयपछि बन्द भएको थियो ।
केही वर्ष “विश्वपरिक्रमा’’ ले बार्षिकोत्सवको आयोजना गरेको थियो भने एक वर्ष “विश्वपरिक्रमा संगीत साँझ’’ को पनि आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा साहित्यकार चन्द्रकला नेवारलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । “विश्वपरिक्रमा’’ १०० अङ्क प्रकाशनको अवसरमा यसले विशेष अङ्क प्रकाशन गर्नुकासाथै रक्तदाता अर्जुन मैनाली र सामाजिक अभियन्ता विष्णुमाया परियारलाई सम्मान गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपाली साहित्यका महारथीहरु काशिवहादुर श्रेष्ठ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र भीमनिधि तिवारीको शतवार्षिकी कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो । साथै लोकप्रिय राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी नेपाल फर्कनु अघि विदाई समारोह “थ्याङ्क्यू एम्वेसेडर’’ कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । अमेरिकाको ४० भन्दा बढी राज्यमा वितरण हुने “विश्वपरिक्रमा’’ डिसी क्षेत्रको एकमात्र छापा अखवार थियो । तर डिजिटल प्रविधिमा मानिसहरुको ध्यान गएकाले “ विश्वपरिक्रमा’’ सन् २०१५ को फरवरीदेखि मुद्रण हुन बन्द भएको थियो ।
करिव ९ वर्षमा प्रकाशन भएका १३३ अङ्क “विश्वपरिक्रमा’’ले त्यस कालखण्डको एउटा ईतिहास बोकेको छ र अव लाईब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा संरक्षण हुने भएपछि यो पत्रिकाको ईतिहास पनि सुरक्षित हुने भएको छ ।
ईनेप्लिजसँग कुरा गर्दै सो पत्रिकाका सम्पादक गोविन्द गिरी प्रेरणाले “विश्वपरिक्रमा’’पत्रिकाको डिजिटल कपी नेपालको मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा पनि रहेको वताए ।